‘सिरिसको फुल’ मन परेन « Loktantrapost
‘सिरिसको फुल’ मन परेन
२२ मंसिर २०७२, मंगलवार ०६:११
लक्ष्मी न्यौपाने ‘सरु’ दश बर्षे जनयुद्ध र एकीकृत माओबादीको प्रसङ्गमा झापामा सुनिदै आएको नाम हो । जनयुद्धका बेला बन्दुक बोकेकी लडाकू उनी अहिले एमाओबादी पार्टीकी जिल्ला नेतृ हुन् । पत्रपत्रिकाहरूमा बेला बेला खरो लेख लेख्ने उनीसँग लोकतन्त्र पोस्टले गरेको पुस्तक वार्ता प्रस्तुत छ–
दामोदर न्यौपानेको ‘एम्बुसमा ६ बर्ष’ । कान्तिपुरमा कार्यरत रहँदा उहाँले पत्रकारका आँखाले देखेको जनयुद्धको चित्रण पुस्तकमा गर्नु भएको छ । फेसबुकमा भएको सम्पर्कका कारण लेखकले नै मलाई त्यो पुस्तक उपहार पठाइदिनु भएको हो । पछि काठमाडौँमा प्रत्यक्ष भेट्दा धन्यबाद दिएको थिएँ ।
पढिसकेपछि त्यसले सोच र विचारमा नयाँ ऊर्जा भरोस् । गरिखाने वर्गको हितमा समर्पित होस् । जीवन दर्शन सम्बन्धी बढी नै मन पर्छ ।
कृष्णसेन इच्छुक । उहाँका रचना मन छुने किसिमका छन् ।
‘सेतो धरती’ अमर न्यौपानेको ।
महिनामा २ वटासम्म नयाँ पुस्तक किनिन्छ । पत्रपत्रिका धेरै पढिन्छ ।
जनयुद्धकालमा बन्दुक बोकेका बेला कतिको पढ्न पाइन्थ्यो ?
आन्तरिक प्रकाशनका पुस्तक बढी पढ्न पाइन्थ्यो । विरोधीका पुस्तक पढ्न निषेध थिएन ।
पहिलोपल्ट पारिजातको ‘सिरिसको फुल’ पढ्दा मन परेन र च्यातिदिएँ । पछि उहाँको जीवनी पढेको त मन प¥यो । फेरि खोजेर ‘सिरिसको फुल’ पढेँ । त्यसपल्ट चाहिँ पुस्तक च्यातिन । पछि थाहा पाएँ–मन नपरेका पुस्तक पारिजात पनि च्यात्नु हुन्थ्यो अरे ।
विहान उठेर पढ्छु । मुड चल्यो भने दिउँसो पनि पढ्छु ।
पुस्तक कसरी राख्नु हुन्छ ?
पुस्तक जोगाउनै गाह्रो, देखेपछि लगिहाल्छन् । आफ्नै लाइव्रेरी छैन ।
डाइमन शमशेरको ‘सेतो बाघ’ ।
पुस्तक लेख्ने सोचाई ?
तत्काल सोचेको छैन ।